कोरियामा नेपाली कामदारका गुनासैगुनासा
काठमाडौं, १५ फागुन । दक्षिण कोरियाको आन्सानस्थित मानव संसाधन विकास संस्था (एचआरडी) अन्तर्गत ईपीएस कामदार परामर्श केन्द्रमा नेपालीका वाषिर्क हजारौ गुनासा दर्ता हुने गरेका छन् । सन् २०१४ मा मात्रै नेपालीले ९ हजारभन्दा बढी...
एमालेको बैंक खातामा १६ करोड रुपियाँ ! अरु दलसँग कति छ पैसा ?
काठमाडौं, १५ फागुन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख दलहरुले आयब्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस घाटामा र एमाले र एमाओवादी भने बचतमा छन् । गत वर्ष एमालेले १६ करोड,...
गम्भीर अपराधका पीडकले अब क्षमादान नपाउने
काठमाडौं, १५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पीडकलाई क्षमादान दिनसक्ने गरी भएको कानुनी व्यवस्थाबुधबार खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले दुई पक्षबीचको मेलमिलापका लागि पीडित पक्षको पूर्ण सहमति अनिवार्य...
प्रधानाध्यापकको छोराछोरीको विहे भोजका लागि तीन दिन विद्यालय बन्द
वीरगन्ज, १५ फागुन । पर्साको सेढवामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक जितेन्द्रप्रसाद गौरका छोराछोरीको बिहेभोजका लागि तीन दिन बन्द भएको छ। सार्वजनिक सूचनै जारी नगरी विद्यालय प्रशासनले बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तीन दिन विद्यालय बन्द...
रुसले फिर्ता माग्यो सोभियतकालीन ऋण ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर
काठमाडौं, १५ फागुन । रुस सरकारले ५७ वर्षअगाडि तत्कालीन सोभियत संघले नेपाललाई दिएको ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण तिर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोभियत संघ विघटन भएको २६ वर्षपछि रुसले ऋण...
सिंगापुरमा दैनिक एक जना नेपाली पक्राउ, अनअराइभल भिसा बन्द गर्ने संकेत
काठमाडौ, १५ फागुन । आकर्षक रोजगारीको लोभमा अवैध तरिकाले जाँदा वा बसोबास गर्दा सिंगापुरमा दैनिक एकजना नेपाली पक्राउ पर्छन् । यसै कारण सिंगापुरले नेपाली नागरिकलाई सहजै दिँदै आएको अनअराइभल भिसा बन्द गर्ने संकेत दिएको...
पाकिस्तानी जेलबाट छुटेका मीनबहादुर अब विदेश नजाने
काठमाडौ, १५ फागुन । ‘आफ्नै देश आइपुग्दा एकदम खुसी छ, अब केही टेन्सन हुदैन’, वायाँ कानमा मुन्द्रा, रातो रंगको हुक, निलो जिन्ससँगै कालो चम्पल लगाएका गुल्मी वडागाँउ- ३ का मीनबहादुर सर्तुङ्गेले त्रिभुवनविमानस्थलमा उत्रेलगत्तै खुसी...
लोक सेवा आयोगमा को-को सिफारिस भए ?
काठमाडौँ, १४ फागुन । संवैधानिक परिषद्ले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पुर्व सचिव उमेश मैनालीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२५ को उपधारा २ बमोजिम मैनालीलाई सिफारिस गरेको हो ।...
काठमाडौँमा ढुकुटी खेल्दै गरेका १० जना पक्राउ, ४५ लाख रुपैंया बरामद
काठमाडौँ, १४ फागुन । ढुकुटीबाट ठगिएर सयौं बासिन्दा ‘घर न घाट’को भइरहेको बेला काठमाडौँमा ढुकटी खेलिरहेको अवस्थामा १० जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुको साथबाट नगद तथा चेकसमेत गरी ४५ लाख रुपैंया पनि बरामद भएको छ...
एमालेमा केन्द्रीय नेताहरुको कार्यविभाजनमा ‘महाभारत’
काठमाडौँ, १४ फागुन । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा बिहीबार पनि सहमति जुट्न सकेन । नेताहरुको कार्यविभाजन र पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनका लागि शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको...
लोकलाई लाज: प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीले अख्तियारबाटै छोरी अन्माए
काठमाडौं, १४ फागुन । पदको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निकायका कर्मचारी आफैले पदको दुरुपयोग गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका हुन् । विहीबार कार्कीले...
सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसला- युद्धकालका गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन पाइँदैन
काठमाडौँ, १४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती बेपत्ता लगायतका युद्धकालका गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नसकिने फैसला गरेको छ । अदालतको नयाँ आदेशसँगै पीडितले न्याय पाउने ढोका खुलेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र...
« 1 … 6,288 6,289 6,290 6,291 6,292 … 6,930 »
रुपन्देहीमा सार्वजनिक सम्पत्ती तोडफोड, नेपाल प्रहरी र प्रशासन मुकदर्शक (तस्वीरसहित)
उपसचिव प्रेम सञ्जेलमाथि करारका महिला कर्मचारीद्वारा कुटपिट
कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनको सम्भावना !
लकडाउन होइन, जलेश्वरमा ५ दिन निषेधाज्ञा
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्– पार्टीभित्रको वहस पदको छिनाझपटी होइन
सप्तरीमा थप २३ जनामा कोरोना पुष्टि
कोरोना संक्रमण देखिएपछि २ जना सम्पर्कविहीन
चितवनमा भेटियो गाईमा नयाँ संक्रामक भाइरस
क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका ६६ जनामा कोरोना पुष्टि
सेती नदीमा २ जना स्वास्थ्यकर्मी बेपत्ता, अर्का एकको उद्धार